Wasiirka Qorshaynta Oo ka Hadlay Mashaariicdii La Hirgeliyay Ee laga Maal-geliyay Sanduuqa SDF
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Somaliand Dr. Sacad Cali Shirre, ayaa ka war-bixiyay halka ay marayaan iyo kuwa ka fulay mashaariicdii la qorsheeyay in laga maal-geliyo sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF, kaasi oo ay wadamadda qaadhaan bixiyeyaashu Somaliland ugu shubaan kaalmadda.
Read more: Wasiirka Qorshaynta Oo ka Hadlay Mashaariicdii La Hirgeliyay Ee laga Maal-geliyay Sanduuqa SDF
Doorka ay hay’adaha aan Dawliga ahayni ku leeyihiin horumarka Dalka
Wasiirka Wasraadda Qorshaynta Qaranka Somaliland Dr.Sacad Cali Shire ayaa khudbad aad u xiisa badan ka jeediyay 7 April, 2015 Xarunta dhaqanka Hargiesa taasi oo uu kaga hadlayey “ Doorka ay hay’adaha aan Dawliga ahayni ku leeyihiin horumarka Dalka”
Munaasabadan oo ay ka soo qaybgaleen Maamulka Xarunta, Ururuda Bulshada, Masuuliyin ka socotay Haydaha Dawlada iyo kuwa aan dawliga ahayn ardayda Jaamacadaha iyo marti sharaf kale ayaa ugu horey Axmed Ibraahim Cawaale oo ahaa Xidhiidhiyaha Barnaamijka ayaa waxa uu madasha ka akhriyey sooyaalkii taariikheed ee Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Dr Sa'ad Cali Shire iyadoo intaa ka dibna uu Wasiirku khudbadii uu kaga hadlayey Isbedelka Doorka ay hay’adaha aan Dawliga ahayni ku leeyihiin horumarka Dalka uu halkaasi ka soo jeediyey . waxa uu wasiirku si cilmiyaysan uga hadlay Ururada Bulshada Gaar ahaan kuwa sama falka oo uu sheegay inay ka mid yihiin ururada Bulshada ayna yihiin kuwa ugu waxtarka badan. Waxa uu si faahfaahsan uga hadlay Qaabdhismeedka Ururuada Samafalka iyo kaalinta ay ugu jiraan bulshada oo uu sheegay inay bulshada ka taageeraan meelaha ugu muhiimsan isagoo xusay inay dadka ka hawlgalaana u badanyihiin dad si mutadawacnimo ah ugu adeega Bulshada.
Wasiirku waxa uu isbarbarshig ku sameeyey ururada Samafalka Bulshada ee Somaliland iyo kuwa dalka ingiriiska isagoo sheegay inay dawlada ingiriiska ka jiraan ilaa 161,000. Oo ururada samafalka halka ay inaga hayadaheena samafalku aad u yaryihiin. Waxa uu wasiirku xusay inay muhiim tahay in la tayeeyo haydaha samafalka ee aanay tirada badani muhiim ahayn.waxa uu ka dhawaajiyey Wasiirku in marka Adeega Samafalka ee dalka la barbar dhigo Dadyawga kale ee Caalamka ay ina tusinayso inaanu wali samafalku aad u dhexgalin dhaqankeena ayuu yidhi Dr. Sacad Cali Shire Wasiirka Qorshayntu. Isagoo sheegay inay diinteenuna inagu dhiirigalisay u Samafalka Mujtamaca. Taasna lagu gaadhi karo horumar .
Ka dib markii uu Wasiirku soo gabagabeeyey Khudbadiisa waxa halkaasi su’aalo Mawduuca la xidhiidha ku waydiiyey Wasiirka xubno ka mid ah ka soo qaybgalayaasha isagoo wasiirkuna su’aalahaa dhamaantood ka jawaabay.
Daah-furka Mashaariicda Sanduuqa Horumarinta Somaliland(SDF) ee Gobalada Bariga
Wafti Ka Kooban Wasiiradda Wasaaraddaha Caafimaadka, Waxbarashada, Kallumaysiga, Wasiiru Dawlaha Wasaaradda Maaliyada iyo Xubno ka socda Sanduuqa Horumarinta Somaliland SDF ayaa dhagax dhigay Mashaariic Cusub oo laga hirgalin doono gobalada bari lagana Maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland(SDF).
Mashaariicdan laga hirgalinayo Deegaamadda kala duwan ee Gobalada bariga waxaa fulinaya Wasaaraddaha kala ah Kalmuumaysiga, Waxbarashada, Caafimaadka iyo Biyaha iyadoo laga-maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland SDF. Waxaa uu ugu horayn Waftigu dhagax dhigeen Goobo laga dhigi doono Baraf dhaliye iyo Qaboojiye loogu talagalay inay dadka ku dhaqan Deegaanka Conqor ay ku kaydsadaan kaluunka, Deegaanka Xiis ayaa sidoo kale waxa la dhagax dhigay Baraf dhaliye iyo Qaboojiye, Dekedda laga hirgalin doono Degamada Maydh iyo waliba Baraf dhaliye iyo Qaboojiye ayaa ay waftigu dhagax dhigeen. Cusbitaalka guud ee Magaalada Ceerigaabo ayaa isagana dib udhis iyo dayactir lagu samayn doono iyadoo laga hawlgalin doono dhakhaatiir ajanabi ah oo ku takhasuusay cudurada kala duwan. Iskuulka Boodhinka ee Dayaxa ayaa isagana ay waftigu soo dhagax dhigeen dib udhiska iyo dayactirka lagu samayn doono. Dhinaca kalena waxa Degamada Ceel afwayn la dhagax dhigay Mashruuca biyo balaadhinta ee Degaankaasi. Sidoo kale mashaariicda la dhax dhigay wax ka mida Iskuulka Boodhinka iyo Cusbitaalka guud ee Magaalada Laas-Canood kuwasoo lagu samayn doono dib udhis iyo dayactir, iyadoo cusbitaalka Laascanood laga hawlgalin doono dhakhatiir Ajaaniba
Intii u waftigu ku guda jiray hawlaha dhagax dhiga mashaariicdan waxay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi kala duwan sharaxaad ka siinayeen Mashaariicdan iyo waxyaabaha ay ka tari doonaan baahiyaha ka jira deeganadaasi, Bulshada ku dhaqan Degaanadaas ayaa iyaguna dhankooda uga mahad celinayey Xukuumada iyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland mashaariicdan iyagoo sheegay inay ka faa'idaysan doonan wax wayna ka tari doonto baahiyaha asaasiga ah.
Maalinta Ololaha Nadaafada Qaranka
Waxa maanta si heer qarana looga fuliyey dhamaan gobalada iyo Degmooyinka Dalka Olalaha Naadafada Qaranka. Iyadoo ay ka qaybqaadanayeen dhamaan bulsha waynta reer Somaliland ee ku dhaqan Gobalada iyo Degmooyinku
Hawlwadeenada Wasaaradda Qorshaynta Qaranka oo uu horkacayo Wasiirka Wasaaradda,Wasiirku-Xigeenka, Agaasimaha guud , Agaasimayaasha Waaxyaha iyo dhamaan Shaqaalaha Wasaaradda ayaa waxay si wayn uga qaybqaateen Ololahaasi. Waxay bartilmaameedsanayeen goobaha qashinka iyo hadhaaga waxyaabaha la isticmaalay yaalaan ee agagaarka Masjidka Markaska tabliiqa ee Bariga Magaalada Hargiesa halkaasi oo ay ka uruiyeen Qashinkii iyo waxyaabaha bilicda waxyeelaya,iyagoo adeegsanaya Gaadiidka iska-rogooyinka oo loogu talagalay inay qashinka qaadaan.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Dr ,Sacad Cali Shire ayaa isagoo la hadlaya Warbaahinta waxaa uu sheegay muhiimada ay leedahay ilaalinta Nadaafada Deegaanka Miyi iyo Magaalo, Waxaanu u soo jeediyey Bulsho wayntu inay marwalba ku dadaalaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen si wada jira ilaalinta fayadhawrka iyo Nadaafada.
Waxa Huteel Ambassaddor lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan xog ururinta Sahanka Aragtiyaha Muwaadinka.
Tababarkani waxa uu socday 28th – 31th March, Waxaana ka qaybqaadanayey 40 Xubnood oo iskugu jira Hawlwadeenada Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Xafiiska Sanduuqa Horumarinta Somaliland SDF.
Tababarkan oo uu soo diyaariyay Xafiiska Xoghaynta Mashaariicda Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF ayaa ay ujeedadiisu ahayd sidii Casharo ku saabsan Sahanka Xog ururinta Aragtiyaha Muwaadinka ee Mashaariicda Horumarinta loo siin lahaa hawlwadeenada ka hawlgali doona Barnaamijka. Waxaana mudadii afarta Maalmood ahayd ay ka qaybgalayaashu ku qaateen casharo la xidhiidha ,Qaabka Xogta loo soo ururinayo, Sida dadka loola xidhiidhayo , Sida loo isticmaalayo Qalabka GPS-ka ee lagu soo saarayo goobaha loo asteeyey in Xogta laga soo ururiyo
Tababarkan waxa furay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorshaynta Mr Cabdirashiid Axmed Guleed, isagoo halkaasina hadalo dardaaran ah uga soo jeediyey ka qaybgalayaasha tababarka.
Xog ururintan ku saabsan Aragtiyaha Muwaadinka ee Mahsaariicda Horumarinta, ayaa ka qabsoomi doonta dhamaan gobalada dalka horaanta bisha Afraad ee Sanandkan 2015ka
Waxana lagaadhi doona ilaa 1,634 Qoys oo ku kala dhaqan Lixda gobal ee dalka , iyadoo xogtana laga soo ururin doono ilaa 6,536 Qof oo iyagu ka tirsan qoysaskaasi,
waxa kale oo xogta laga soo ururin doona Waaxyaha Dawaladda , Dhalinyarada, Haydaha Warbaahinta, Ururada Haweenka, Ururada aan dawliga ahayn ,Bulshada Rayidka , Oday dhaqmeedka, Culimaa’udiinka iyo Beelaha laga tirada badanyahay
Waxaana fulinayaa Barnaamijkan Sahanka Xog ururinta Waaxda Xog ururinta Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Xafiiska xidhiidhka Mashaariicda Horumarinta Somaliland(Communication Hub)
Natiijada ka soo baxda Xog ururintan Sahanka Aragtiyaha Muwaadinka ee Mashaariicda Horumarintu waxay wax wayn ka tari doonta.
Sidii loo heli lahaa xog saxa oo hagta Qorshaha isku-xidhka Mashaariicda Horumarinta islamarkaana Bud-dhig u noqota Qiimaynta iyo kormeerka Mashaariicda Horumarinta Somaliland.
In la ogaado fikirka Muwaadiniinta ay ka qabaan Mashaariicda Horumarinta iyo Waxqabadka Dawaladda.
In la helo xog hagta Xafiiska Xidhiidhinta Mashaariicda Horumarinta ee Wasaaradda Qorshaynta iyo Xafiiska Sanduuqa Horumarinta Somaliland(SDF),si ay u dajiyaan fariimo wacyigalineed oo ku haboon Bulshada kuna saabsan waxqabdka Dawladda.